Australia oo adkaynaysa jinsiyad bixinta - BBC News Somali
Image caption Xaflad dad lagu gudoonsiinayo dhalashada dalka oo horaantii sanadkan lagu qabtay magaalada Melbourne
Dadka raba in ay qaataan dhalasho ayaa maridoona imtixaanno ay ka mid yihiin luuqadda Ingiriiska iyo awoodda ay u leeyihiin in ay ku dhaqmaan "qiyamka Australia" sida uu sheegay ra'iisalwasaare Malcolm Turnbull.
Ra'iisalwasaare Turnbull ayaa sheegay in isbadalladani ay xaqiijin doonaan in dadka soogalootiga ah ay si fiican u dhexgalaan bulshada.
"Waa muhiim in ay fahmaan in ay la imanayaan ka go'naansho ku aadan ilaalinta qiyamka Australia" ayuu yiri.
Ra'iisalwasaare Turnbull oo sharaxaya "Qiyamka Australia" ayaa sheegay in ay waajib tahay in soo galootigu ay taageeraan xoriyadda diinta iyo sinaanta jinsiga ama ragga iyo dumarka.
"Xushmaynta dumarka iyo carruurta, kuwaasi waa furaha qiyamka Australia", ayuu yiri isaga oo sii raaciyay in aan loo dulqaadan doonin shaqaaqadaha guryaha dhexdooda ka dhaca.
Image caption Ra'iisalwasaaraha Australian, Malcolm Turnbull iyo wasiirka socdaalka Peter Dutton
Australia oo lagu eedeeyay xadgudub ka dhan ah qaxootiga
Imtixaanno dheeri ah oo luuqadda Ingiriiska ah, kuwaas oo kala ah akhrinta, qoraalka, dhagaysiga iyo ku hadalka.
Caddaymo la xiriira in qofku uu ku milmay bulshada, taas oo ay ka mid yihiin in uu soo shaqeeyay, iskuul soo dhigtay, ama uu xubin ka yahay ururrada bulshada.
In uu si rasmi ah u sii daganaa ugu yaraan afar sano.
Dadka soo dalbanaya jinsiyadda saddex jeer oo kali ah ayay codsiga soo gudbisan karaan, qofkii isku daya in uu khayaano sameeyana isla markaasba waxaa la go'aamin doonaa in dhacay oo uu san u qalmin in la siiyo dhalashada dalka.